Eme ka ndụ na Save A Train | Save A Train
Home > Zụọnụ Ndụmọdụ > Eme ka ndụ na Save A Train
Abụ m onye uchu njem na na kwa a solo njem. Ihe kacha mma banyere nke a eke na ị ga-esi na-ahụ na ụwa na ị na-adịghị na-eche ka onye ọ bụla na-free na mgbe atụmatụ a njem na ha conveniences n'ime mmasị. Ya mere, mgbe ị na-solo njem ị ga-esi na-eme atụmatụ gị na njem na bụla ebe ị chọrọ ịga na na mgbe na otú ị chọrọ ịga. ịhụ France anọwo na m ime ndepụta n'ihi na ezi oge ụfọdụ ma karịsịa ka a njem site na ụgbọ okporo ígwè bụ ihe na m bụ atụmatụ ime. Ọzọkwa, na-na-adịghị ize ndụ n'akụkụ na-enweghị a egbughị njem, M kpebiri na m Book My Train Ticket online na tupu.
Ya mere olee otú m malite akwụkwọ m gbaa ụgbọ okporo ígwè online? Nzọụkwụ mbụ tupu m akwụkwọ ndị gbaa ụgbọ okporo ígwè m mkpa ịghọta oge nke m njem na-maara, nke bụ ebe na m chọrọ ịhụ. Otú map nke France e ẹkenịm? Nke a nyeere m aka ịghọta ihe bụ ka m ga na-eleta onye ọ bụla n'ime ndị na-ebe.
Ozugbo m na ẹkenịm, wee bịa ọrụ nke gwara ya bụ ụbọchị na kwa oge m na-eji nke ọ bụla ebe. AKWỤKWỌ m ụgbọ okporo ígwè tiketi kwesịrị m ka kpọmkwem banyere ụbọchị na oge nke m njem. N'ihi ya na-eme atụmatụ dị mkpa na-zuru okè.
Ntinye akwụkwọ gbaa ụgbọ okporo ígwè online
Ọ bụ ezie na e nwere a uru nke akwụkwọ m ụgbọ okporo ígwè tiketi site na web bụ na i nwere ike dị na-eji otu portal ọzọ mee mgbanwe na ntinye akwụkwọ; na ụdị onye m bụ na m chọrọ na-abụ onye ikpeazụ nhọrọ. Mgbe ahụ, wee nzọụkwụ nke akwụkwọ m ụgbọ okporo ígwè tiketi online. Na niile ụbọchị na oge nke njem ugbu a ebe, ntinye akwụkwọ site online portals ka www.saveatrain.com mere ọrụ dịtụ mfe. Ọzọkwa, dị nnọọ na-ele nri banyere ebe a ka unu na-kwesịrị ịkpachara anya banyere website na ị na-eji maka akwụkwọ m ụgbọ okporo ígwè tiketi online. Isi ihe mere ịbụ na ọtụtụ weebụsaịtị zoro na-akwụ ụgwọ, dị ka nhazi ụgwọ na ntinye akwụkwọ ebubo.
Ndụ mere mfe
taa technology ama maa mere ndụ anyị yiri na mere ejegharị ejegharị nile n'ụwa dịtụ mfe site n'ịhụ na ị akwụkwọ gị gbaa ụgbọ okporo ígwè online enweghị hassle na-enwe obi ike banyere njem na ị chọrọ ibido. M akwụkwọ m gbaa ụgbọ okporo ígwè online, ị nwere?
Ihe mgbaru ọsọ anyị bụ ime ka ndụ gị mfe mgbe ị na-azụ njem, ka anyị mara ma ọ bụrụ na e nwere ihe anyị nwere ike ime mma (ma ọ bụrụ na ị na-agụ ruo ugbu a unu kwesịrị a coupon, mere, n'ihi na 5% discount were coupon: emailcoupon) – https://www.saveatrain.com
Ị chọrọ Embed anyị blog post jidesie gị na saịtị, ị nwere ike ma buru anyị na foto na ederede na dị nnọọ na-enye anyị n'aka na a njikọ a blog post, ma ọ bụ na ị pịa ebe a: https://embed.ly/code?url=https://www.saveatrain.com/blog/make-your-life-easier-with-save-a-train/ - (Pịgharịa gaa na ala a obere ịhụ Embed Usoro)
Ọ bụrụ na ị chọrọ inwe obiọma ọrụ gị, i nwere ike na-eduzi ha kpọmkwem n'ime anyị search peeji nke. A njikọ, ị ga-ahụ anyị kasị ewu ewu ụgbọ okporo ụzọ gasị – https://www.saveatrain.com/routes_sitemap.xml. Inside ị anyị njikọ maka English ọdịda ibe, ma anyị nwekwara https://www.saveatrain.com/ja_routes_sitemap.xml, na i nwere ike ịgbanwe / ja na / ru ma ọ bụ / pl na ndị ọzọ asụsụ.